Ku Saabsan - iRise : iRise
01 Qoraalka Hawlgalka
Hadafkayaga hoose waa in aan si dhaqso ah ula socono ganacsadaha horey loo maro oo loo maro isku-dhafan iyo barnaamijyo tababaro kuwaas oo ay ku jiraan qalab wax ku ool ah iyo ilaha ay u baahan yihiin si ay u horumariyaan una gaarsiiyaan fikirkooda suuqa.
Aragtida xad dhaafka ah waxay tahay in la isticmaalo awoodda ganacsiga Soomaalida ee ganacsiga iyada oo loo marayo tiknoolajiyada iyo raadinta qalab cusub oo loo adeegsan karo dhaqankeena, macnaha guud iyo ganacsiga.
Waxaa nalagu hanweynahay afar falsafad dhiirigelin leh:
Bulshada. Waxaanu bixinaa qiimo sarre leh oo ku saabsan dhisida hal bulsho oo leh meeleyn guud.
Waxaan aaminsanahay in guulaheena laga heli karo in ay noqdaan hal bulsho oo leh meel la wadaago. Waxaan aaminsanahay, waddada kobaca dhaqaalaha digital-ka, waxay ku dhex jirtaa iskaashiga iyo caawinta midba midka kale.
Si loo abuuro fikrado cusub iyo xalal, waxaan ku hanuuninaynaa fikirka-dibadda-sanduuqa maskaxda.
Waxaan ku dadaalnaa sidii aan ugu guuleysan lahayn natiijada guusha ay u gaarto xubnaha iyo Soomaaliya.